Statement of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar | maungpeace
← Children of Heaven (စိတ်ချမ်းသာစရာ ခလေးငယ်များ)
နိုင်ငံရေးက မှန်သလား မှားသလား ပြောရခက်တဲ့ လူတယောက်ကိုရည်ရွယ်ပါသည်။ →
photo credit – San Yu Kyaw (link https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435735119798607&set=a.188408411197947.41574.100000863696638&type=1&theater)
(I just wish that people from Burma/Myanmar would read what Tomás Ojea Quintana said in his statement before they went out to the street to protest him. မြန်မာပြည်က လူ တွေ ကင်တားနား ကို လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ကန့်ကွက် ဆန္ဒမပြခင် သူရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဘာတွေ ပြောထားလဲ ဆိုတာ ဖတ်သွားရင် ကောင်းမယ်။)
(အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ မြန်မာပြည်လူအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်)
သြဂုတ်လ ၄ ရက် ၂၀၁၂
၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လ က စပြီး အထူးကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ခြောက်ကြိမ်မြောက် ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာအစိုးရကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့ အတွက် နဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး လိုက်လျော ကူညီပေးတဲ့အတွက် အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ ကျနော် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေး နဲ့ ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီး၊ (အလုပ်သမား ဝန်ကြီး) လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေး ဒုဝန်ကြီး၊ ပညာရေး ဒုဝန်ကြီး၊ ရှေ့နေချုပ်၊ တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဌ အပါအဝင် အခြား လွှတ်တော်အမတ်များကိုလည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ကျနော် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ဒေသ ဝန်ကြီး တို့ အပြင် အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ နဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းက ကိုယ်စားလှယ်တွေ နဲ့လည်း တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့လည်း လူအခွင့်အရေး ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး ရန်ကုန်၊ အင်းစိန်ထောင်မှာဘဲ ရခိုင် အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်း တစ်ယောက်၊ မနေ့ကဘဲ လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် နဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အင်းစိန်ဆေးရုံ က အကျဉ်းသား ဖြိုးဝေအောင် တို့ အပါအဝင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူ (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား) သုံးယောက် ကိုလည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် တွေ နဲ့ သံရုံး အသိုင်းအဝိုင်း ကိုလည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်းကူညီခဲ့တဲ့ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ နဲ့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အစိုးရ က သံရုံး အဖွဲ့ တွေ နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ အတွက် စီစဉ်ပေးတဲ့ ရခိုင်ပြည် ခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ မောင်းတောမှာတော့ ပြည်နယ် နဲ့ ဒေသခံ တာဝန် ရှိသူတွေ၊ မူစလင် အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေကို တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ မီးရှို့ခံရတဲ့ ရခိုင်ကျေးရွာ တွေကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး နေရာ အသစ်တည်ဆောက်မှု တွေကိုလည်း လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကျနော် နဲ့ ကျနော့် အဖွဲ့တွေဟာ စစ်တွေ နဲ့ မောင်းတောမှာ ရှိတဲ့ ပြည်တွင်း အခြေပြောင်းရွှေ့ခံကြရတဲ့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ မူစလင် အသိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခုလုံးရဲ့ စခန်းတွေကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘူးသီးတောင် ထောင်ထဲမှာ ရခိုင်အရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်း ငါးယောက် ကိုလည်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲ က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် အတွက် ရှေ့နေ လိုက်ပေးမယ့် ရှေ့နေကိုလည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အခုလို တင်းမာမှု တွေ မြင့်မားနေတဲ့ နေရာကို ကျနော် နဲ့ ကျနော့် အဖွဲ့တွေကို သွားရောက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ အတွက် အစိုးရကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော်ရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာပြည်အတွင်းမှာ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲ၊ အကူးအပြောင်းကာလမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ ကျနော် အခု လတ်တလော အောင်မြင်မှုများကို ကြိုဆိုပါတယ်။ အဲဒါတွေ ကတော့ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမား အဖွဲ့ကြီး နဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု ပုံစံ အားလုံး ၂၀၁၅ မှာ အဆုံးသတ်ရေး နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်မှာ ကလေးစစ်သား စုဆောင်းခြင်း နဲ့ အသုံးချခြင်း တွေကိုမလုပ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စရပ်တွေ အတွက် သဘောတူခဲ့တာပါ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ တဖြည်းဖြည်း ပါဝင်ပတ်သက်မှု များလာတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ နဲ့ အခြား တာဝန်ရှိသူတွေ ကြောင့် အားတက်မိပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ ပိုပြီး အချက်ကျကျ ငြင်းခုန်မှုတွေ၊ ဦးတည်ရာ လမ်းကြောင်းအပေါ် သုံးသပ်မှုတွေ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နှုန်း နဲ့ ကျယ်ပြန့်မှု တွေ၊ အဓိက အားဖြင့် ဖြေရှင်းရမယ့် စိန်ခေါ်မှု နဲ့ အန္တရာယ် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အလားအလာတွေ ကို တွေ့ကြုံခဲ့ပါတယ်။ ဒီမို ကရေစီ အကူးအပြောင်းကာလ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေဖို့ နဲ့ လူအခွင့်အရေးတွေကို လေးစားလိုက်နာဖို့၊ အဓိက အခန်းကဏ္ဍ ကနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ့် အစိုးရ နဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့် အဖွဲ့အစည်း တွေ ဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော် နဲ့ အမျိုးသားလူအခွင့်အရေး ကော်မရှင်တို့ ကလည်း တဖြည်းဖြည်း ရုပ်လုံးပေါ်လာပါပြီ။ အဲဒီ ရှုထောင့်က ကြည့်မြင်သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဟာ အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ လတ်တလော ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ်ဆောင်တာတွေ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ပါရီ စံနှုန်းများ နဲ့ ကိုက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ နဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အတွက် အများကြီး လိုသေးပေမဲ့ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက် ဖြစ်တဲ့ လူအခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေး နဲ့ ကာကွယ်ရေးတွေ အသိအမှတ်ပြုလာတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ နောက်ပြီး အဖွဲ့ကြီးဟာ ယုံကြည်ကိုးစားမှု တိုးတက်လာစေဖို့ နဲ့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်တာကို ပြသဖို့ အတွက် သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အပေါ် အခြေခံပြီး လူမှု အသိုင်းအဝိုင်း တည်ဆောက်နေတာကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ အဲဒီ အတွက် အဓိက ကျတာကတော့ ဥပဒေအဟောင်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်ခြင်း နဲ့ ဥပဒေအသစ်များပြုခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ ဥပဒေကြမ်းများ ရေးဆွဲရာမှာ သက်ဆိုင်တဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့ အတွက်လည်း အားတက်မိပါတယ်။ ဥပဒေကြမ်းတွေကို ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ စနစ်တကျ စဉ်းစဉ်းစားစား ရေးဆွဲဖို့၊ အချိန်များများ ပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဥပဒေကြမ်းတွေကို လွှတ်တော် (ပါလီမန်) မှာ ဆွေးနွေးဖို့ မတင်သွင်းခင် မီဒီယာတွေမှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြတာတွေ အတွက်လည်း အားတက်မိပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာဘဲ ဥပဒေပြုရေး အခန်းကဏ္ဍက ပြုပြင် လုပ်ဆောင်နှုန်းတွေ နဲ့ ပတ်သက်မှု တွေကို အများပြည်သူများအကြား သတိပြုမိအောင် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်ရမှာ ကလည်း ဥပဒေတွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ နီးပါး အရေးကြီးပါတယ်။ ၎င်းအပြင် ဥပဒေပြုရေး အခန်းကဏ္ဍမှာ ပိုပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့၊ အရေးကြီး ကိစ္စများ ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ဖို့၊ အချိန် အတိုင်းအတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိဖို့တွေလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အဓိက အားဖြင့် ကျနော်အရင်တုန်းက ထောက်ပြခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာ လူအခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေ နဲ့ လုံးဝ မကိုက်ညီတဲ့ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ၊ အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေ၊ တရားမဝင် အသင်းများနဲ့ ဆက်သွယ်ခြင်း ဥပဒေ စတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြုပြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အတွက် အဓိက ကတော့ ထိရောက်၊ လွတ်လပ်ပြီး ဘက်မလိုက်တဲ့ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ရှိဖို့ပါ။ အဲဒီကိစ္စအတွက် ကျနော် အရင်တုန်းက တိုက်တွန်းချက် တချို့ ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တရားလွှတ်တော်ချုပ်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းဆီက နည်းပညာအကူအညီများ နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားရေး အကူအညီ ရယူလာတဲ့ အတွက် အားတက်မိပါတယ်။
အဲဒီလို တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု များရှိပေမဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ တွေ နဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး အခြေခိုင်လာဖို့ အတွက် လူအခွင့်အရေး အရ ဖြေရှင်းရမယ့် စိန်ခေါ်မှု တွေ နဲ့ လုံးထွေးနေရဆဲဘဲ ဆိုတာ ရခိုင်အရေး ကိစ္စက ပြသနေပါတယ်။
ရခိုင်ပြည် က လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေက စိုးရိမ်စရာပါ။ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် အိမ်တွေ၊ ဘဝတွေ ဆုံးရုံးသွားခဲ့ရတဲ့ လူအများအပြားကို ကျနော် မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ခံစားခဲ့ရတဲ့ နှစ်ဘက်အသိုင်းအဝိုင်းက ပြည်သူတွေ အတွက် ကျနော် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အစိုးရ ရဲ့ တရားဥပဒေ ပြန်လည် စိုးမိုးဖို့ လုပ်ဆောင် ချက်တွေ ဖြစ်တဲ့ လုံခြုံရေး အင်အားစုတွေ တိုးမြှင့်ချထားတာ နဲ့ ဒီ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း တွေကို ပေါ်ပေါက်စေတဲ့ အကြောင်း အခြင်းအရာတွေကို စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး လုပ်ဖို့ ကော်မရှင်ဖွဲ့တာတွေကို လည်း မှတ်သားထားပါတယ်။ ကျနော် စိုးရိမ်တာတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု က တရားဥပဒေပြန်လည် စိုးမိုးဖို့ အတွက် လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက် ကျုးလွန်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို လည်း အမြောက်အများ လက်ခံရရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေ ကတော့ လုံခြုံရေးအင်အားစုက အင်အား မတန်တဆ အသုံးချတာ၊ မတရား ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းတာ၊ သတ်ဖြတ်တာ၊ တရားဥပဒေ လမ်းကြောင်းအတိုင်း မစစ်ဆေးတာ၊ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အချိန်မှာ နှိပ်စက် ညှင်းပန်းတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကျနော် အခုအချိန်မှာ ဒီ စွပ်စွဲချက်တွေကို ဟုတ် မဟုတ် စစ်ဆေးဖို့ မလုပ်နိုင်ပေမဲ့ ဒီဟာတွေဟာ အကြီးအကျယ်ကို စိုးရိမ်စရာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ နဲ့ တာဝန်ခံ ဖို့ အလွန်ဘဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတာ အဖြစ်မှန် မပေါ်ပေါက်ဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဖြစ်မှန် ကို ပုံဖျက်ထားတာတွေ၊ ပုံကြီးချဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ သာ အဖြစ်မှန် နေရာကို ဝင်ရောက်ပြီး မယုံကြည်မှုတွေ၊ တင်းမှုတွေသာ အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ တိုးပြီး ပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်လည်း အခြားလူများက တောင်းဆိုထားတဲ့ လွတ်လပ်ပြီး ယုံကြည်လောက်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို ဒီ လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု တွေ အတွက် အရေးကြီး ကိစ္စအနေနဲ့ လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို စစ်ဆေးဖို့ အတွက်လည်း ကျနော် ကူညီချင်ပါတယ်။
အစိုးရ နဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ က ရွှေ့ပြောင်းခံရတဲ့ လူတွေ အတွက် အရေးပေါ် ပစ္စည်းတွေ၊ လူသားခြင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီတွေ ပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိက အားဖြင့် စခန်းအကြီးတွေ မှာဆိုရင် ပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့ လူတွေအတွက် အစားအသောက်၊ရေ၊ အိမ်သာ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစတဲ့ အခြေအနေတွေက အလျင်အမြန်ဖြေရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ လူသားခြင်း စာနာမှုအကူအညီများ တိုးမြှင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမှု ကို တုန့်ပြန်ဖို့ ကျနော် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကို တိုက်တွန်းပါတယ်။ နောက်ပြီး လူသားခြင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီတွေကို ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိစေရ၊ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိစေရ စတဲ့ စံနှုန်းတွေကို လိုက်နာမှု မရှိဘဲ ဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ် ဆိုတဲ့ အမြင်တွေကို အထူးသဖြင့် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများ အကြားမှာ ရှိနေခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ နဲ့ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း များ ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သဘောထားတွေအတွက် လည်း စိုးရိမ်မိပါတယ်။
နောက်ထပ် ပြောရရင် အစိုးရ အနေနဲ့ လူသားခြင်းစာနာမှု အကူအညီများကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ကြိုးစားနေပြီး အခုလို ရွှေ့ပြောင်းခံရတဲ့ လူတွေအတွက် ပြန်လည် နေရာချထားဖို့ အလယ်အလတ် အစီစဉ်တစ်ခုချမှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်လည် ထူထောင်ဖို့ နဲ့ ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး အတွက် ရေရှည် စီမံကိန်း ဆွဲရမယ် ဆိုတာလည်း အာရုံထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး ဆိုတာဟာ အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခု ကို ခွဲခြားဖို့ မဟုတ်ဘဲ ပေါင်းစည်းသွားရေးကိုသာ အခြေခံသင့်ပါတယ်။ အဲဒီ အစီအစဉ်တွေဟာ အားလုံးရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားလိုက်နာပြီးတော့ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စေတဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာ တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ဦးတည်သင့်ပါတယ်။ ကျနော် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေ ကြားမှာ ဖြစ်နေတဲ့ နက်နဲလှတဲ့ ရန်လိုမုန်းတီးမှု နဲ့ မယုံကြည်မှုတွေ အတွက် အရမ်းကို စိုးရိမ်ပါတယ်။ အစိုးရ အနေနဲ့ သတ္တိရှိရှိ မလုပ်ဆောင်ဘူး ဆိုရင် ဒီအခြေအနေတွေက ပိုမို ဆိုးရွားလာဖို့ဘဲ ရှိပါတယ်။
ဒီကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော့် တာဝန် ဝတ္တရားအရ လုပ်ပိုင်ခွင့် တလျှောက်လုံး ရိုဟင်ဂျာ အသိုင်းအဝိုင်း ကို စနစ်တကျ ခွဲခြားဆက်ဆံ တာကို ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု တွေကတော့ ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် ငြင်းပယ်ခြင်း သို့ တရားဝင် နေထိုင်ခွင့် ငြင်းပယ်ခြင်း၊ သူတို့ ရဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်ကို ကန့်သတ်ခြင်း၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့် ကန့်သတ်ခြင်း တို့အတူ အခြား ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ မူဝါဒတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ ကိစ္စတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ လုပ်ဆောင်မယ် လို့ ကျနော် မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒါတွေ အတွက် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဖြစ်မှု ဥပဒေကို နိုင်ငံတကာ လူအခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေ နဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြုပြင်ပေးမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အနေနဲ့ လည်း ဒီနိုင်ငံမဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေ အတွက် လူအခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေပေါ် အခြေခံပြီး ရေရှည် အဖြေတစ်ခု ရှာပေးဖို့ အတွက် ပါဝင်ဆောင် ရွက်ဖို့ အခန်းရှိပါတယ်။ ကျနော် မြန်မာ့ အိမ်နီးချင်းတွေ အပါအဝင် ဒေသတွင်းမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကို တိုက်တွန်းလိုတာက တော့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများအရ၊ မိမိရဲ့ နိုင်ငံပိုက်နက်တွေ အတွင်းမှာ မိမိတို့ရဲ့ နိုင်ငံသား အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုသည် ဖြစ်စေ၊ မပြုသည်ဖြစ်စေ လူအခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ နဲ့ နိုင်ငံတကာ ဒုက္ခသည်များ ဥပဒေအရ မူရင်း ဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံကို ပြန်မပို့ဖို့ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာပါ။
ကျနော့် ရဲ့ တာဝန်အတွင်းမှာ ရခိုင် အဖြစ်အပျက် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်းစိန် နဲ့ ဘူးသီးတောင် အကျဉ်းထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဝန်ထမ်း ခြောက်ယောက် ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ အခြား အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း တွေက ဝန်ထမ်းတွေ ထိန်းသိမ်းခံရတာကို လည်း သတင်းရထားပါတယ်။ ကျနော့် မေးမြန်မှု ပေါ်မှာ အခြေတည်ပြီး ပြောရရင် ဒီ ဖမ်းခံရတဲ့ လူတွေကို ဆက်ဆံပုံတွေ အတွက် အလွန်ဘဲ စိတ်ပူပါတယ်။ ကျနော့် အမြင်အရ သူတို့ ကို စွဲထားတဲ့ အမှု တွေဟာ အခြေအမြစ်မရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး တရားဥပဒေ လမ်းကြောင်း အရလည်း ညီညွတ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒီလို လုပ်ရပ်တွေဟာ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကို ပြန်ပြီး အမှတ်ရစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ အဲဒီလူတွေကို ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ နဲ့ သူတို့ အမှုတွေကို ပြန်စစ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော် တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက်ဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ကို ရှေ့နေ မလိုက်ပေးဖို့ တားမြစ် ခြိမ်းခြောက်ခံရတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ကျနော် တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ လူတွေ နဲ့ မိသားစုတွေ ကို လက်စားချေ တုံ့ပြန်မှုတွေ မလုပ်ဖို့၊ ကာကွယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
ကျနော် အင်းစိန် ထောင်မှာ ရှိတဲ့ အခြား နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် သမ္မတ ကို ပြီးခဲ့တဲ့လ က အကျဉ်းသားတွေ ထပ်လွှတ်ပေးတဲ့ အတွက် ချီးကျုးသလို အင်းစိန်ထောင် နဲ့ အခြားထောင်တွေ မှာ ကျန်နေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေအတွက်လည်း စိုးရိမ်မိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ချွင်းချက် မရှိ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ဟာ ဒီအဆင့်တွေမပါဘဲ ရှေ့ဆက်သွားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အနေနဲ့လည်း ဒီကိစ္စကို ဆက်လက် တောင်းဆိုနေဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အရေအတွက် ကွာခြားနေမှု ကို လည်း ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေတာကိုလည်း သတိပြုမိပါတယ်။ အချက်အလက်တွေ နဲ့ အရေအတွက် အတိအကျရဖို့ အားလုံးပါဝင်တဲ့ သေသေချာချာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တွေလုပ်သင့်တယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာလည်း သက်ဆိုင်သူ အားလုံး ဥမာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အရေးတကြီး လုပ်ရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာတွေ လုပ်နေတဲ့ တပြိုင်နက်တည်းမှာဘဲ တချို့ သိထားပြီးသား အကျဉ်းသားတွေ ကို လွှတ်ပေးဖို့ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှ နှောင့်နှေး မနေသင့်ပါဘူး။
အင်းစိန် ဆေးရုံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်နှစ်ခုအတွင်းမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ဖြိုးဝေအောင် နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ ဖြိုးဝေအောင် ကို လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့် နဲ့ မနေ့ကဘဲ လွှတ်လိုက်ပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ကျနော် ဒီသတင်းကို ကြိုဆိုပါတယ်။ သမ္မတ နဲ့ အစိုးရကိုလည်း ဒီလို ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ အတွက်လည်း ချီးကျုးပါတယ်။
ကျနော် ရဲ့ တာဝန် အတွင်းမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ နဲ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တင်းမားမှု နဲ့ ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်းရေးအတွက် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု တွေ၊ အထူးသဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းက ကိစ္စတွေ အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၁၀ ခု နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ရယူထားတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး နောက်ပိုင်း လိုအပ်ချက်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကနေပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီမှု ရရှိဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်ရမှာတွေ ကိုလည်း သတိပြုမိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားများအကြား ရေရှည်တည်တံ့မယ့် နိုင်ငံရေး အဖြေရှာဖို့ အတွက် အားထုတ်လုပ်ဆောင်ဖို့ တို့အပြင် နက်နဲလှတဲ့ မကျေနပ်မှုတွေ နဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
ထို့အတူ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး အကြီးအကျယ် ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ အဲဒါတွေကတော့ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဥပဒေပြင်ပ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ တိုင်းပြည်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်း၊ နဲ့ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း စတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို ကျနော် ဆက်တိုက်ရရှိနေပါတယ်။ ထပ်ပြီးတော့ မိုင်း အသုံးပြုမှုတွေ၊ ကလေးစစ်သား အသုံးပြုခြင်းတွေ၊ အတင်း အဓမ္မ ခိုင်းစေခြင်း နဲ့ ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကို ပဋိပက္ခမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေ အားလုံးက အသုံးပြုနေတယ် လို့ စွပ်စွဲမှုတွေရထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို အခုလို စွပ်စွဲချက်တွေကို အရေးကြီး ကိစ္စ အနေနဲ့ ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကျနော် ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ အစိုးရ နဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အားလုံး လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ကြားမှာ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူ တွေကို ကာကွယ်ဖို့ အများကြီး လုပ်ရပါမယ်။ နိုင်ငံတကာ လူအခွင့်အရေး နဲ့ လူသားခြင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ ကို လေးစားလိုက်နာ ရပါမယ်။
အစိုးရ မထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နေရာတွေ အပါအဝင်၊ လက်နက် ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေ၊ ထိခိုက်ခံရတဲ့ သူတွေ လိုအပ်ချက်တွေကို ကူညီ ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ နဲ့ လူသားခြင်း စာနာမှု ဆိုင်ရာ အဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ အစိုးရ ထိန်းချုပ်တဲ့ နယ်မြေဖြစ်စေ၊ အစိုးရ မထိန်းချုပ်တဲ့ နယ်မြေ ကဖြစ်စေ၊ အကူအညီ လိုအပ်နေတဲ့ လူတွေ အားလုံးအတွက် အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ အစဉ်အမြဲ လွတ်လပ်ပြီး မြင်သာထင်သာ ရှိတဲ့ ဝင်ခွင့် ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကတော့ ဒီလို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ မကျေနပ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့က ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ နဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး အတွက် အရေးကြီးပါတယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ခံစားခဲ့ရတဲ့ လူတွေ ရဲ့ ဒုက္ခတွေ ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း နဲ့ သူတို့ အတွက် ဖြေသိမ့်ခွင့် ပေးခြင်းဟာ အနာဂတ်မှာ အခုလို ချိုးဖောက်မှု မျိုးမှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်ဟာ တာဝန်ရှိသူ အမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ၊ လွှတ်တော် အမတ်တွေ နဲ့ အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေး ကော်မရှင် ပေါ်ပေါက်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် ယုံကြည်တာကတော့ ပါတီပေါင်းစုံ၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော် အနေနဲ့ ဒီလို ခက်ခဲပြီး အင်မတန်လိုအပ်တဲ့ အမှန်တရား ဖော်ထုတ်ရေး ကော်မရှင် ဖန်တီးပေးဖို့ သင့်တော်ပါတယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ခြေလှမ်းအနေနဲ့ သက်ဆိုင်သူ အားလုံး၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ ခံစားခဲ့ရသူတွေ အပါအဝင် သူတို့ ရဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ၊ အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေး ကော်မရှင်အပေါ် အမြင် နဲ့ ဘယ်လို ပုံစံထားရမယ် ဆိုတာတွေကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု စတင်သင့်ပါတယ်။ အခြား အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ နိုင်ငံက သင်ခန်းစာတွေကိုလည်း ယူသင့်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ထဲထဲဝင်ဝင် ရှိလာတာနဲ့ အမျှ လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေ၊ စည်းကမ်းတွေ ဟာ အချက်အခြာကျတဲ့ နေရာမှာ ရှိပါတယ် ဆိုတာ ကို ကျနော့် တာဝန် အရကူညီ ပြသနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တွေ ဟာ ဒီနိုင်ငံ ကို စ ဝင်လာနေပါပြီ။ လူ့အခွင့်အရေး ကို လေးစားလိုက်နာခြင်းအားဖြင့် အားလုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ခွဲခြားမှု မရှိခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိခြင်း၊ တာဝန်ခံမှု ရှိခြင်း နဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ရှိခြင်းတွေ ကို အာမခံနိုင်ပါတယ်။ ယခုလို လူ့အခွင့်အရေး လေးစား လိုက်နာမှု ရှိခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား အားလုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ကနေ ပိုပြီး တရား နည်းလမ်း ကျကျ မျှတ တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခု ကို ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး နဲ့ လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တွေအတွက် လူအခွင့်အရေး စပြီး လိုက်နာ ဖို့ အချိန် က အခု လက်ရှိ အချိန်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြောရရင် လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စဟာ ဆွေးနွေးမှု စာရင်းက ပြုတ်ကျမသွားသင့်ပါဘူး။ နောက်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်း နဲ့ နားလည်မှု တွေ ဟာ အခု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး ရဲ့ တပ်ဦးမှာ ရှိသင့်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကို မောင်းနှင်တဲ့ အား၊ မြန်မာပြည်သူ လူထု ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ သတိပေးနေတဲ့ အား ဖြစ်နေသင့်ပါတယ်။ ကျနော် ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် တာဝန် ကတော့ အဲဒီ အချက်ကို ဆက်တိုက် သတိပေးနေရမှာပါ။
မြန်မာအစိုးရ ရဲ့ ဖိတ်ခေါ်မှု နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ မှာ ကျနော် အစီရင် မခံခင် မြန်မာပြည်ကို နောက်တစ်ခေါက် လာချင်ပါသေးတယ်။ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား များ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ တိုးတက်ဖို့ အတွက် အကျိုးရှိမယ့် အကြံဥာဏ်တွေကို ပေးပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားပါ့မယ် ဆိုတာ ကျနော် ထပ်မံ ကတိပြုပါတယ်။
Original news source – United Nations Human Rights, office of the High Commissioner for Human Rights (link http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12405&LangID=E)
This entry was posted in translation (ဘာသာပြန်) and tagged Human Rights, Tomás Ojea Quintana, UN. Bookmark the permalink.